ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်မှာ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ Movies ၅ခု - MoviesFan
ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်မှာ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ Movies ၅ခု
ကဲ ခရစ်စမတ်ကျောင်းပိတ်ရက် ရုံးပိတ်ရက်တွေစတော့မယ်ဆိုတော့ အားလုံးပျော်နေကြမှာပေါ့နော်။ ပိတ်ရက်မို့လို့ ခရီးသွားတဲ့သူတွေရှိသလို အိမ်မှာပဲ အေးဆေးနှပ်ကြမယ့် ဘော်ဒါတွေလဲ ရှိကြတယ်မလား? ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်မှမသွားပဲ ပိတ်ရက်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနားကြမယ့် သူတွေအတွက် ခရစ်စမတ်ရာသီနဲ့လဲကိုက်ပြီး ကြည့်ဖို့သင့်တော်တဲ့ Christmas holidays Movies လေးငါးခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်နော်။
ဇာတ်ကားတွေက တစ်ခုမှ အသစ်တော့မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်မကြည့်ရသေးတဲ့ကားပါရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် အသစ်ပဲလေနော့။ ကြည့်ဖူးပြီးသားတွေပါတယ်ဆိုရင်လဲ ပြန်ကြည့်ပြီး အရင်တုန်းက အမှတ်တရလေးတွေကို ပြန်တမ်းတလိုက်ကြရအောင်နော်။
တစ်ခုပြောစရာရှိတာကတော့ အားလုံးသိပြီးသား ကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေမယ့် Home alone ကို ထိပ်ဆုံးမှာထည့်ထားမိတာကိုခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။ ကိုယ်တွေဆို Home alone ကို ငယ်ကတည်းကနေ ခုအရွယ်ထိ ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်း ပြန်ပြန်ကြည့်နေမိတဲ့အပြင် ပြန်ကြည့်မိတိုင်းလည်း ပထမဆုံးစကြည့်ခဲ့ရတဲ့ feeling လေးကို သတိရအောက်မေ့မိလို့ပါ။ ကိုယ်တွေငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်တိုင်းမှာ TV ဆိုတာကြီးမရှိပဲ အောက်စက်ဆိုတာပိုင်နိုင်သူခပ်ရှားရှားကိုး။ ဦးလေးအိမ်မှာ လူတွေစုပြီး TV ကြီးရှေ့မှာ နေရာလုထိုင်ပြီး ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အပျော်တွေဆိုတာ ခုထိကို မမေ့နိုင်စရာဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အဲ့ feeling လေးသိတဲ့သူတွေ ရှိတ်သွားကြပါဦး။
1 – Home Alone (1990)
2 – The Muppet Christmas Carol (1992)
3 – Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)
5 – Arthur Christmas (2011)
ကဲ မကြည့်ရသေးတဲ့ကားတွေပါရင် ပိတ်ရက်မှာ အေးဆေးကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။ ကြည့်ပြီးသားကားတွေဆိုရင်လဲ ငယ်ဘဝလေးတွေကိုပြန်အမှတ်ရစေမှာ အမှန်ပဲမို့ ထပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ ……..
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ ခရစ်စမတ်ဖြစ်ကြပါစေနော်…….
Christmas, List, Tips
Previous Post: ‘Kakegurui – Compulsive Gambler’ Live Action ရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကို ကြေညာလိုက်ပြီ
Next Post: ဂိမ်းစက်ထဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့ရန် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ Jumanji: Welcome to the Jungle